အနက်ရောင် အိပ်မက်တစ်ခု၏ ၀ိဥာဉ်များ...: ရှင်းပြပါရစေ...
ငါ့အမေက ဆရာမလေ ဖေဖေက ငါ့အတွက် အနစ်နာခံခဲ့တာထင်တယ် ငါလဲနာပါတယ် တော်တော်လက်သံပြောင်တယ် တော်တော်ကောင်းတဲ့ပို့စ်နော် ရေးတဲ့သူကလဲ ရွှေဥာဏ်တော် စူးရောက်ပါပေတယ်
YOU MIGHT BE KNOCKED BY YOUR TEACHERS !
gr8 post dude!! so for girls, we should find "ကျောင်းဆရာ" ?? =D
ဟေး။ သိပ်ကောင်းတဲ့ အစီအစဉ်ပဲ။ ဆရာမလေးများ ဆက်သွယ်ပါပေါ့။ :D
THIS IS HILARIOUS...... :)) :))
@FIRST, I WAS THINKING LIKE YOU ARE TALKING TOO MUCH.....
THEN.....YAH RIGHT, GOT THE POINT!
BTW, IT WILL BE BETTER IF YOU CAN GET MARRIED TO A HEADMISTRESS, SO UR KIDS WILL NOT NEED TO GO TO SCHOOL @ALL...... :p
~ YOU R MY ROCK! ~
ဟာ လေးစားလောက်တဲ့အနာဂတ်ရဲ့ ဖခင်ကောင်း တစ်ယောက်ပဲ စံပဲကွာ ဒီအတိုင်းတစ်ကယ်သာ ဆရာမလေးနဲ့ လက်ထပ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ မျိုးဆက်လေးတွေ က ပညာတတ်ကြီးတွေဖြစ်ကြ အုန်းမှာ အသေအချာပဲ အဖေကြီးလည်း ကျူရှင်ဖိုးတွေ အတွက်သိပ်ရင်မခုန်ရတော့ဘူးပေါ့ကွာ ပြောနေကြာပါတယ်ကွာ သဘောမတူရင်ခိုးပြေးမလား ကိုယ်ကူညီမယ် ဆရာမလေးနဲ့ပြောတာ :D
အဟိ နာကတော့ ဒါတွေမတွေးမိလို့ ကျူရှင်ဖိုး ကျောင်းစားရိတ် ဆရာ၊ဆရာမတွေ ဆက်ကြေး အဲလေ ယောင်လို့ ကန်တော့ကြေး တွေကို ကောင်းကောင်းခံနေရတယ်..။
အိပ်မက်မဲ ကိုလဲ အရမ်းစိတ်ဆိုးတယ် ဒီပိုစ့်ကို အခုမှတင်လို့ အရမ်းနောက် ကျသွားပြီ ပြင်ဆင် လို့မရတော့ဘူး ...။
အယ်....အဲ့လိုကြီင်္းလားး အနော်တော့ ကျောင်းဆရာမ ကို အဲ့လိုမတွေးမိဘူးဗျ လစာမကောင်းလို့ လည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့ ဟားဟားး ဟုတ်သား အခုခေတ်က ဟိုမှာမေးခွန်းလိုက်ရတာနဲ့ကျူရှင်တွေ အပြိုက်တက်နေကြတဲ့ ခေတ်ဆိုတော့ စာရေးသူရဲ့ အတွေးလေးမဆိုဘူး ဟဲဟဲ ဒင်းလည်း ဆရာမ ကိုပဲ အသဲစွဲအောင် ချစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ ဇတ်လမ်းရှိခဲ့တယ်ဖြစ်မယ် ။
နိုင်ငံခြားကပါလာတဲ့ ဘွဲ့က ပညာရေးဘွဲ့ ပါသားရေ…
စနစ်တ ခေတ်မီသိပ္ပံနည်းကျ သင်ကြားမှုတွေုနဲ့
ကလေးတွေရဲ့ စိတ်ပညာပါမကျန် Human Development (in all dimensions)
အရမ်းလွဲမှားနေပြီ. :P Inn I would say this post is not reasonable
If you can’t accept arrange marriage for love, I can accept %100. That’s completely logical, although we can’t really prove love. But now your decision depended on the future tuitions fees… humm read the above message lol… :P anyway best luck with your arrange marriage :P Just kidding marriage should be the fruit of love, I believe. :) :) :)
The way you express the corruption of education is good and it makes me smile as it is humorous essay. if i were your father, i would not accept your reason as you can't giveagood reason. :):):) heheheheheh!
မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက် အဲဒီလောက်အနစ်နာမခံပါနဲ့ကွယ်။ ကြည့်ရတာ blackdream ရဲ့ ကောင်မလေးက ကျောင်းဆရာမ လားမသိဘူး။ သွားတိုင်ပြောမယ် .. :P ပိုစ့် ကိုဖတ်နေရင်းနဲ့online မှာရှိတဲ့ ဆရာမတွေရိုက်မှာ စိုးလို့ တိတ်တိတ်ကလေး ပြန်သွားပါတယ်။ ( home!)
အစကတော့ ဟုတ်မလိုလိုဘဲ သူကပဲ တကယ့်အချစ်ကို ကိုးကွယ်နေသလိုနဲ့ နောက်ကျတော့ သူ့ရဲ့ မျိုးဆက်သစ်တွေကို ပညာတတ်ဖို့ကို ချမ်းသာတဲ့ကောင်မေလေးကို ယူရင်လဲ ကျုရှင်ဖိုးတွေထွက်ဦးမှာ ပြီးတော့ စာလာပြတဲ့ ဆရာမကိုမယုံရသေးဘူး။ ကျောင်းဆရာမလေးယူထားတော့ အေးရောပေါ့ အဖေလဲ စာတွေပြန်သင်ရတာပေါ့။
အဲ... ဘယ်လိုတွေ ပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး... မိဘတွေက ကောင်းမယ်ထင်လို့ စီစဉ်တာ သားကငြင်းတယ်ဆိုတော့ သားအလွန်ပေါ့... ဟိ ဟိ... သားချစ်တဲ့သူကို သားယူမယ်ဆိုတော့ သားကံကောင်းတာပဲ... ဘာပဲယူယူ အားလုံးကောင်းတယ်... သားကြိုက်တာယူ... ဟိ ဟိ... အခုခေတ်က ကျောင်းဆရာမလေးတွေလဲ လစာကောင်းပါတယ်...း)
ဟားဟား blackdream ကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီး)))